Fitaovana fingotra, fantsom-bava, fehy vita amin'ny kodiarana - Tianzheng
Xingtai Tianzheng Sealing Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra fitrandrahana fingotra naorina tamin'ny 2010, ary miorina amin'ny tanàna Xingtai, Provinsi Hebei China, akaikin'ny Capital Beijing sy seranan-tsambo Tianjin.
Izahay dia manana ekipa R&D mahery indrindra sy mandroso, varotra ary famokarana, mpiasa maherin'ny 100. Ny orinasanay dia manana teknolojia manokana sy fitaovana sarotra. Fitaovana isan-karazany azo vokarina ao anatin'izany ny EPDM, PVC, VITON, NBR, SILICON ary ny stronjy spaonjy.
Fametahana tombo-kase mekanika Ny fomba fametrahana ny tombo-kase mekanika dia miovaova arakaraka ny karazana tombo-kase mekanika sy ny karazana masinina, saingy ny zava-dehibe ilaina amin'ny fametrahana dia saika mitovy. Ny tombo-kase mekanika dia iray amin'ireo fototra m ...
Fahalalana ny fanaraha-maso ny tombo-kase fingotra 1. Inona avy ireo entana fanaraha-maso ny tombo-kase fingotra? 1) Hamarino raha madio ny vokatra. 2) Hamarino raha misy kilema ve ny vakoka; 3) Hamarino raha toa ka misy trimming / ed ...
Ny fahasamihafana eo amin'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy ny vokatra extruded
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy ny vokatra miharo volo Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny famokarana, ny vokatra vita amin'ny fingotra dia be mpampiasa kokoa. Ho an'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika izay hita eny rehetra eny, ...
Azonao atao ny mifandray aminao mihaino